Ixabiso eliphantsi lomthamo we-Organic Compound NPK yokwenza isichumisi abaXhobisi kunye neFektri | YiZheng
Inkqubo ye- Uhlobo olutsha lwe-Organic kunye ne-NPK ye-Compoundizer ye-Granulator Machine luhlobo lomatshini wokuqhubekekisa umgubo wezinto ezingafunekiyo kwiigranu, ezifanelekileyo kwimveliso yomxholo we-nitrogen onje ngesichumisi esinganyangekiyo.
Luluphi uhlobo loMatshini oLuhlaza kunye noMxube weSichumisi seGranulator?
Inkqubo ye- Uhlobo olutsha lwe-Organic kunye ne-Compound Fertilizer Granulator Machine Isebenzisa amandla e-aerodynamic aveliswe ngamandla ajikelezayo ojikeleza amandla oomatshini kwisilinda ukwenza izinto ezifanelekileyo zixubeke ngokuqhubekayo, i-granulation, i-spheroidization, i-extrusion, ukungqubana, i-compact kunye nokomeleza, ekugqibeleni ibe zii-granules. Lo matshini usetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yesichumiso somxholo we-nitrogen onje ngesichumisi se-organic nesingaphiliyo.
Inkqubo ye- Uhlobo olutsha lwe-Organic kunye ne-Compound Fertilizer Granulator Machine sebenzisa isantya esiphezulu sokujikeleza ngamandla ukwenza izinto zomgubo ocolekileyo ngokuxubeka okuqhubekayo, igranulating, spheroidizing kunye noxinano, ukuze kufezekiswe injongo yegranulation. Ubume beengqungquthela bujikeleze, i-spherical degree i-0.7 okanye ngaphezulu, ubukhulu be-particle ubukhulu buphakathi kwe-0.3 no-3 mm kwaye izinga lokugcoba lifikelela kuma-90% okanye ngaphezulu. Ubungakanani be-particle diameter bunokuhlengahlengiswa ngokobungakanani bomxube kunye nesantya sokujikeleza isantya, ngokubanzi, isantya sokuxuba esisezantsi, isantya sokujikeleza esiphakamileyo, isayizi yobukhulu bamasuntswana incinci.
Izinto eziluncedo zohlobo olutsha lwe-Organic kunye ne-Compound Fertilizer Granulator Machine
►Ireyithi yokuNyusa ePhakamileyo
►Ukusetyenziswa kwamandla asezantsi
►Igobolondo yenziwe ngetyhubhu yentsimbi eqina, eyomeleleyo kwaye engakhekiyo.
Isichumisi seMveliso yeOrganic kunye neCompound
Umthamo woLuhlu oMtsha lweOrganic kunye neCompound Fertilizer Granulation Production Line isusela kwiitoni ezingama-10 000 ngonyaka ukuya kwiitoni ezingama-300,000 ngonyaka.
Amacandelo emveliso yemveliso yezichumiso epheleleyo
1) Isikali sebhanti ngombane
2) Ukuxuba umatshini okanye umatshini wokugaya, iindlela ezahlukeneyo ezisekwe kwiimfuno zenkqubo
3) Ibhanti yokuhambisa kunye neebhakethi ilifti
4) I-Rotary granulator okanye i-disc granulator, iindlela ezahlukeneyo zokhetho kwiimfuno zenkqubo
5) Rotary umatshini wokomisa
6) Umatshini opholileyo ojikelezayo
7) Isefu yokujikeleza okanye isisefu eshukuma
8) umatshini Ukwaleka
9) Ukupakisha umatshini
Iimpawu zoLungiso lweMveliso yeOrganic kunye neCompound
1) Umgca weemveliso zeGranulation uphela ziimveliso zethu ezivuthiweyo, ziqhuba zizinzile, umgangatho wazo uphezulu, kwaye zilula ukugcinwa kunye nokulungiswa.
2) Iqondo lokuba ibhola liphezulu, izixhobo zokuphinda zisetyenziswe kwakhona zimbalwa, ukusetyenziswa kwamandla okubanzi kusezantsi, akukho kungcoliseka kunye nokuziqhelanisa namandla.
I-3) Ukusekwa komgca wemveliso yonke kusengqiqweni kwaye kubuchwephesha obuphambili, kunokuphucula ukusebenza kwemveliso, ukunciphisa iindleko zokuvelisa kunye nesikali semveliso sinokulawulwa ngokulula.
Uhlobo olutsha lwe-Organic kunye ne-Compound Fertilizer Granulator Machine Display Video
Uhlobo olutsha lwe-Organic kunye ne-Compound Fertilizer Granulator Machine Model
Ubungakanani obukhulu (mm)
I-7500 × 2100 × 2200
Egqithileyo Uhlobo olutsha lwe-Organic kunye ne-Compoundizer ye-Compactizer
Okulandelayo: I-Flat-die Extrusion granulator
Intshayelelo Yintoni Nkqo isichumisi Umxhubi Machine? Nkqo isichumisi Umxhubi Machine sisixhobo ukuxubana ebalulekileyo kwinkqubo yemveliso isichumiso. Iqukethe isilinda yokuxuba, isakhelo, iimoto, isinciphisi, ingalo ejikelezayo, umhlakulo ovuselelayo, ukucoca isikrweqe, njl., Imoto kunye nendlela yokuhambisa zibekwe phantsi komxube ...